War Cusub Uganda Oo Canshuur yaab leh Ku soo rogtay Kalaamka Alle – Daily Som
War Cusub Uganda Oo Canshuur yaab leh Ku soo rogtay Kalaamka Alle
By Staff on May 16, 2018 No Comment
Dowlada Uganda ayaa amar ku siiyay hoggaamiyeyaasha diimaha inay bixiyaan canshuur marka la kala iibsanayo kitaabka Quraanka iyo kan aybalka Masiixiyiinta, sida ku xusan warbixin uu qoray wargayska Daily Monitor.
Madaxda Canshuuraha Uganda Doris Akol ayaa sheegtay bishii Abriil inaysan habbonayn in marka horeba aan canshuur laga qaadin kitaabaha lagala iibsanayo.
Arrintani ayaa imaanaysa billooyin un ka dib markii waaxda canshuuraha iyo hoggaamiyeyaasha diimaha dalkaasi ay ka wadahadleen Arintaan Soo Cusboonaatay.
Xoghayaha guud ee ururka imaamyada iyo muwaacidiinta, Ramadhan Mugalu ayaa u sheegay wargayska Daily Monitor in dowladda ay gaartay meel aanan laga filaynin. ” sidee u canshuuri karta hadalka Eebbe” ayuu yiri
Sidoo kale go’aankaasi ka hor yimid oo aan ku faraxsanayn Joshua Kitakule oo ah xoghayaha guud ee golaha diimaha dalkaasi, waxa uuna sheegay in kutubta aan loogu talo gelin in faa’iido laga sameeyo, balse ay khalad tahay in la canshuuro.
Masuuliyiinta diimaha dalka Uganda waxay sheegayaan in qiimaha lagu kala iibsado kitaabka Baybalka Masiixiyiinta uu sare ka kacay.
War Cusub Uganda Oo Canshuur yaab leh Ku soo rogtay Kalaamka Alle added by Staff on May 16, 2018